कतार वा युएई ग्राफिक डिजाइनरको काम गर्न जान मिल्छ कि मिल्दैन?
Thu, Oct 29, 2020 | 14:37:13 NST
Total Hits: 1.6 K
प्रश्न: मेरो देब्रे हातको चार वटा औंला छैन । म २/३ वर्ष बैंगलोर, इण्डियामा ग्राफिक डिजाइनरको काम गरेर फर्केको हुँ । ६/७ वर्ष देखि नेपालमा पनि यही काम गरिरहेको छु । मैले दुवै हातले मज्जाले कम्प्युटर चलाउन सक्छु । अब म कतार, युएईजस्ता खाडीका देशहरुमा ग्राफिक डिजाइनरकै काम गर्न जान पाउँछु कि पाउँदिन् ?
उत्तर: कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - मज्जाले जान सक्नु हुन्छ। पत्रपत्रिकामा बिज्ञापन हेरेर सायद भ्याउनुहुन्न होला। यो महंगो पनि पर्न आउछ। सब भन्दा उत्तम उपाय भनेको हप्ता दिन वा महिनामा एक चोटि वैदेशिक रोजगार विभागमा आफ्नो पेशा अनुशारको काम कुन म्यानपावरमा आएको छ बुझ्न सक्नु हुन्छ। वा दुबई, कतार पठाउने म्यानपावरमा गएर आफ्नो वायोडेटा बुझाउन सक्नुहुन्छ। अथवा आफैले अनलाइनमा आफूले चाहेको जव खोजेर अप्लाइ गरेर कागजात उताको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरेर कुनै म्यानपावसँग कुरा गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ।